Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid la taliyihiisii arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid la taliyihiisii arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose
February 26, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Marxuum Cabdulaahi Ciid Cismaan. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid la taliyihiisii arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyadda maanta oo Isniin ah.
“Madaxweynaha Puntland oo ku hadlaya afka goleyaasha Dawaladda Puntland ayaa waxaa tacsi uu u dirayaa guud ahaan shacabka Puntland iyo eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo qoyskii uu ka baxay marxuum Cabdulaahi Ciid Cismaan,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Marxuum Cabdulaahi Ciid Cismaan uu ahaa shaqsi gudashada waajibaadkiisa shaqo ku wanaagsan, islamar’ahaantaana shaqo wanaagsan qabtay muddadii uu ahaa lataliyaha Madaxweynha.
Marxuum Cabdulaahi Ciid Cismaan ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Virginia ee dalka Mareykanka, sida lagu sheegay bayaanka.
Washington-(Puntland Mirror) Murashaxa xisbiga Dimuqraadiga Mrs. Hillary Clinton ayaa u dooratay Tim Kaine ku-xigeenkeeda, haddii ay ku guulaysato madaxweynenimada Maraykanka. Tim Kaine ayaa ah barasaabka gobolka Virginia. Hillary Clinton ayaa Tim Kaine ku tilmaantay nin [...]